Nin ka soo haray qabiil la wada gowracay oo keymaha ku nool+Sawirro – Somali Integration Tv
Guriga uu isaga sameestay waxaana uu daganyahay 50 sano
(SITV-MUQDISHO):_ Ninkan oo ku jira da’diisa 50aad,waxaa uu ka soo haray qabiilkiisa oo la isir gooyay,waxaana uu 22 sano ku noolaa keymaha Amason ee dalka Brazil.
Ninkan oo ka dhashay qabiilka Flecheiros, oo la micno ah “Dadka Fallaaraha”,waxaa uu kali ku yahay Keynta Amazon,halkaas oo uu 22 Sano ku noolaa.
Waxaa uu Dooxada Javari ee Keymaha Amazon ka sameystay God uu ku hoydo,mana oggola in lala xiriiro, Dad iyo Dugaag ciddii isku dayda in ay u dhawaatana,waxaa uu siiyaa digniin,kaddibna waa uu toogtaa oo fallaar iyo Masaar ayuu la dhacaa.
Qofka sheekadan qoray oo aan magaciisa sheegin ayaa ka mid ahaa saraakiil Hay’adda FUNAI ay u dirtay keynta Amazon si xogta qabiilkaas iyo halka ay ku dambeeyeen loo ogaado.
sawir laga qaaday 2012-kii
Hay’addan waxaa ay heysaa taariikhda iyo dhaqamada 30 Qabiil oo reer Brazil ah,qabiilka uu ka soo jeedo Ninkan ee la dabargooyay,waxaa ay ahaayeen kuwo dhulkooda uu hodon ahaa,Ninkan ayaana u heysta in keynta Amazon ay ka mid tahay dhulkooda laguna xadgubi Karin.
Hay’adda waxaa ay hadda u ololeysaa in Ninkaas loo daayo 30kM oo keynta ka mid ah oo uu aaminsanyahay in ay dhulka qabiilkiisa yahay,maalin kasta ayuuna ku wareegaa oo waaba uu waardiyeeyaa.
Qabiilkiisa waxaa xasuuqay oo cirib tiray qabiillo kale intii u dhaceysay qarniyadii 18aad iyo 19aad, sababtuna waxaa ay ahayd kheyraadka ku jira dhulkooda.
Saraakiisha hay’adda ayaa xiriir la sameeyay labo qabiil oo kala ah Kanoê iyo Akuntsu,waxaa ay deris la yihiin Keynta uu Ninkan ku noolyahay.
Godka uu galo ninka si uu ugu dhuunto
Ninkan uma noola sida Bani’adamka,wax xiriir ahna lama laha dadka kale,waxaa uu cunaa Caleynta Geedaha,waxaa kale oo uu ugaarsadaa Cidoodka ama Duurjoogta.
waa ninka ka soo haray qabiilkii ku noolaa keymaha Amazon
Brazil,waxaa ay ka mid tahay dalalka ay ka dhaceen dagaallada sokeeye ee ugu xun caalamka,waxaana lagu xasuuqay qabiillada qaar oo qaarkood uusan xitaa hal qof ka harin.
Scott Wallace,waa Bare sare oo cilmiga Warbaahinta ka dhiga Jaamacadda Connecticut,waa qoraaga buugga ‘qabiillada aan lala xiriirin ee Amozon’.
Kofi Anaan, xoghayihi hore ee Qaramada Midoobay oo geeriyooday